Mi max 1 Double tap screen
Kospet Tank M1 Pro Smartwatch Launches with Several Upgraded Features
Kospet is getting appreciation for its brilliant work in the smartwatch domain. The company has just released its latest integration to extend its famous rugged Tank M Series. It is the Kospet Tank M1 Pro SmartWatch to hit the stage with lots of advanced features and specifications. As per officials, the latest wearable is an …
mi max 1 ကို အသုံးပြု. ဖန်သားပြင်နှိုးရန် နှစ်ချက်တို့ခြင်း အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒီမတိုင်ခင်က ပြီးပြည့်စုံစွာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် စခရင်နိုးတာကို နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းမှောင်သွားပါပြီ။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ အကြံပြုချက် တစ်ခုခုရှိလား။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို reboot လုပ်ရန် ကြိုးစားပြီးဖြစ်သော်လည်း အလုပ်မလုပ်သေးပါ။
June 2022 191